OS X Yosemite: Mac को लागि नयाँ अपरेटिंग प्रणाली | आईफोन समाचार
ओएस एक्स योसेमाइट: म्याकहरूको लागि नयाँ अपरेटिंग प्रणाली
आईप्याड समाचार | | iOS 7, हाम्रो बारेमा, एप्पल उत्पादनहरू
दिउँसो भरि हामी तपाइँलाई सबै समाचारहरू सूचित गर्दैछौं जुन मुख्य भाषणमा भएको थियो जसले डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी २०१ 2014 को टेल कुकको साथ टेलिफोनमा खोलेको थियो। तिनीहरूले एप्पलको दुई राजा अपरेटिंग सिस्टमहरू प्रस्तुत गरेका छन्: आईओएस,, आईडीभिसिसका लागि; र OS X Yosemite, म्याकमा प्रयोग गरिएको अपरेटि system प्रणाली। यदि तपाईं ओएस एक्स योसेमाइटको बारेमा सबै समाचार जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले भर्खर पढ्नु पर्ने हुन्छ तपाईलाई केहि घण्टा भन्दा बढि यो नयाँ अपरेटिंग प्रणालीको बारेमा कुरा गरिरहनु पर्दछ।
एउटा पातलो डिजाइन जुन एकदमै नयाँ लागी परिचित छ। तपाईंले प्रत्येक दिन प्रयोग गर्ने अनुप्रयोगहरू नयाँ सुविधाहरूको साथमा सुधार भएको छ। र तपाइँको म्याक र आईओएस उपकरणहरू बीच एक नयाँ नयाँ सम्बन्ध।
ओएस एक्स योसेमाइटले तपाईको म्याकलाई हेर्ने तरिका परिवर्तन गर्दछ। र तपाई यसको साथ के गर्न सक्नुहुन्छ।
1 डिजाईन: अधिक आईओएस with को साथ लाइनमा ओएस एक्स आवश्यक पर्ने सूक्ष्मतासँग
2 अनुप्रयोगहरू: अधिक सरलीकरण, अधिक क्षमता। ओएस एक्स योसेमाइट।
3 स्पटलाइट: OS X र iOS को लागि खोजी ईन्जिन जुन धेरै बढी शक्तिशाली हुन्छ
डिजाईन: अधिक आईओएस with को साथ लाइनमा ओएस एक्स आवश्यक पर्ने सूक्ष्मतासँग
ओएस एक्समा सबैभन्दा बढी चाहिने चीजहरू मध्ये एउटा यसको डिजाइन परिवर्तन गर्नु हो र गत वर्ष ओएस एक्सको पुन: निर्माणको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो ताकि यो आईओएस with (जस्तै यस अवस्थामा आईओएस)) को अनुरूप होस्। र एप्पलले यो ओएस एक्स योसेमाइटको साथ प्राप्त गरेको छ, आईओएसको साथ परम्परागत ओएस एक्सको विशेषता डिजाइन मर्ज गर्न सफल भयो।
ब्लरहरू धेरै अनुप्रयोगहरूमा विन्डोजहरूको साथ फेला पर्दछ: सफारी, फाइन्डर ... र अधिक सन्देशहरू र फेसटाइम अनुप्रयोगमा जुन अधिक पारदर्शिता प्रस्तुत गर्दछ जसले यसलाई अधिक सरलीकृत र अवलोकन गर्न सजिलो बनाउँदछ। मलाई यो मनपर्‍यो, र थोरै पनि होइन।
ओएस एक्स योसेमाइट ईन्टरफेसको केहि तत्वहरूमा ट्रान्सप्लसेंसी थपेर, हामीले यसको सामग्रीमा अधिक जोड दिएका छौं।
यदि हामीले उदाहरणका लागि विन्डोको विश्लेषण गर्‍यौं भने सफारी, हामी बुझ्छौं कि धेरै परिवर्तन भएको छ र महत्त्वपूर्ण कुरा वेब हो जुन हामीले हेरिरहेका छौं। यसैले हामीसँग मात्र सन्झ्याल नियन्त्रण बटनहरू छन् (नयाँ, अधिक स्पष्ट रंगहरू र कुनै छायाको साथ), नेभिगेसन नियन्त्रणहरू, ठेगाना पट्टी (धेरै, धेरै पातलो र सरलीकृत) र पक्कै पनि, बटनहरू जुन सबै हतियार र हलचल जम्मा गर्दछ। साझेदारी जानकारी र सफारी सेटिंग्स।
अर्कोतर्फ हामीसँग सबै छ OS X Yosemite का लागि नयाँ आइकनहरू। अब तिनीहरू छायाँ बिना नै चापलुसी छन् र ओएस एक्स डकमा अधिक न्यूनतम स्पर्श दिन्छ। हामी वास्तवमै क्रूर आईओएस प्रभावको सामना गरिरहेका छौं र यो यो हो कि यदि हामीले स्प्रिंगबोर्डको डिजाईन ओएस एक्स योसेमाइटसँग दाँज्यौं भने हामी बुझ्छौं कि उनीहरू लगभग टाँगिएका छन्। एप्पल, तपाईंले फेरि गर्नुभयो।
ओएस एक्स योसेमाइटको साथ, हामीले डक र यसको आइकनहरूको उपस्थिति अधिक सुसंगत उपस्थित गराउन सरल बनाएका छौं। प्रतीकहरूमा यो नयाँ दृष्टिकोणले अनुप्रयोगहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई अझ सामञ्जस्यपूर्ण लुक प्रदान गर्दछ जबकि प्रत्येकले तत्काल पहिचान गर्दछ।
अनुप्रयोगहरू: अधिक सरलीकरण, अधिक क्षमता। ओएस एक्स योसेमाइट।
ओएस एक्स ईन्टरफेसको पूर्ण पुनः डिजाइन साथ हामी सबै महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगहरूमा आउँदछौं जुन OS X Yosemite मा अपडेट गरिएको छ। र हामी प्रत्येक अनुप्रयोगको प्रत्येक अपडेटमा रोक्न सक्दैनौं किनकि हामी पोष्ट गर्न सक्दछौं कि एन्जेन्सनहरू पनि पढ्न मनपर्दैन। तैपनि, अर्को पोस्टहरूमा हामी बिस्तारै ओएस एक्स योसेमाइटको बारेमा सबै खबरहरू उजागर गर्नेछौं।
सब भन्दा पहिले हामीसँग मेल, अनुप्रयोग जुन हामी ईमेल पठाउन र प्राप्त गर्न प्रयोग गर्दछौं। एउटा मुख्य उपन्यास यो हो कि हामी D जीबी भन्दा बढीको संलग्नक मेल ड्रप प्रकार्य मार्फत पठाउन सक्छौं। यस्ले कसरी काम गर्छ? एप्पलले फाईल निकाल्छ र क्लाउडमा अपलोड गर्दछ, जब यो काम समाप्त हुन्छ, ईमेलमा फिर्ता संलग्न गर्दछ ताकि प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्दछन्। सावधान रहनुहोस्, यो मेल क्लाइन्टको सर्भरमा होस्ट गरिएको छैन तर एप्पलको हो।
con मार्कअप हामी सिधै मेलबाट फोटो र कागजातहरू सम्पादन गर्न सक्छौं; त्यो हो, हामी फोटोग्राफरको रूपमा हस्ताक्षरहरू थप्न सक्छौं, हाम्रो माउसको साथ लेख्न, स्पीच बबलहरू, पाठ हाल्नुहोस् ... र त्यसपछि यसलाई पठाउनुहोस्।
सन्देशहरू यो पनि धेरै परिवर्तन भएको छ र त्यो हो, अब हामी गर्न सक्छौं एसएमएस प्राप्त गर्न र कल गर्न र लेख्न / प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो आईफोन सिंक्रोनाइज गर्नुहोस्। यो एक क्रान्ति हो किनकि हामी म्याकबाट OS X Yosemite को साथ कल गर्न सक्दछौं बाहिरी सम्पर्कको माध्यमबाट आईफोनलाई हातमा नराखीकन।
अर्कोतर्फ, हामी अडियो सन्देशहरू पठाउन सक्छौं जसरी हामी आईओएस do मा गर्छौं। मध्यरातमा लेखिएका लामा पाठहरूलाई विदाइ, अडियोहरू iMessages वा OS X Yosemite को साथ सन्देशहरूमा आउँदछन्!
हामी व्यक्तिलाई समूहमा थप्न सक्छौं, नाम परिवर्तन गर्न, स्थान साझेदारी गर्न सक्दछौं ... असंख्य नयाँ कार्यहरू जुन हामी आईओएस the को कार्यसँग पूरक हुन सक्छौं।
र अब सबै चीज ओएस एक्सको केन्द्रमा: खोजकर्ता नयाँ विन्डो डिजाईनको अतिरिक्त यसमा धेरै नयाँ प्रकार्यहरू छन् जुन हामी सूचीको साथ हाइलाइट गर्नेछौं।
साझेदारी फोल्डर: अब हामीसँग एक «iCloud» फोल्डर छ जहाँ हामी फाईलहरू समान एप्पल खातामा जडान भएका अन्य उपकरणहरूसँग सिnch्क्रोनाइज गर्न राख्न सक्छौं। ड्रपबक्स, मैले केहि सुनें?
आईक्लाउड ड्राइभ: मैले यस प्रकार्यलाई फाइन्डरमा राखे किनभने हो, तर मैले यसलाई अरू कुनै ओएस एक्स योसेमाइट अनुप्रयोगमा राख्न सक्थें। हामी हाम्रो OS X वा iOS उपकरणलाई पूरक बनाउन आधा बाटोमा छोड्न सक्छौं। उदाहरणको लागि, हाम्रो म्याकको साथ ईमेल लेख्दा र हामीसँग हाम्रो आईफोनमा फोटो छ, हामी एकै साथ हाम्रो म्याकमा अनुप्रयोग बन्द नगरीकन पनि फोटो हाम्रो उपकरणबाट संलग्न गर्न सक्दछौं।
एयरड्रोप: अबदेखि हामी ओएस एक्स योसेमाइटसँग ओएस एक्स र आईओएस उपकरणहरू बीच एअरड्रपको साथ फाइलहरू पठाउन सक्छौं।
एकीकरण iOS 8 con ओएस एक्स योसेमाइट हामी यसलाई पछि छोड्दछौं।
स्पटलाइट: OS X र iOS को लागि खोजी ईन्जिन जुन धेरै बढी शक्तिशाली हुन्छ
विशेष उल्लेख Spotlght, OS X Yosemite र iOS 8 को लागी खोज ईन्जिन छ जुन अब तपाईले अरु धेरै स्थानहरुमा खोज्न सक्नुहुन्छ:
तपाईको म्याकमा चीजहरू खोज्ने सब भन्दा द्रुत तरिका अझ राम्रो हुँदै जान्छ। पुनः डिजाइन गरिएको स्पटलाइट सामने र केन्द्र देखा पर्छ जब तपाईं यसलाई खोल्नुहुन्छ। विकिपेडिया, समाचार, नक्शा, चलचित्र, र अधिकका स्रोतहरूबाट जानकारी खोज्न यो महान छ। र यसले तपाईलाई बढि प्रगति, तपाईको नतीजाहरुमा अधिक अन्तरक्रियाशीलता प्रदान गर्दछ। त्यसोभए तपाईं कागजात पढ्न, ईमेल पठाउन वा परिणाममा क्लिक गरेर कल गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी अर्को पोस्टमा स्पटलाइट सम्बन्धी सबै जानकारी पनि हेर्नेछौं, जुन एकै समयको लागि भएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» ओएस एक्स योसेमाइट: म्याकहरूको लागि नयाँ अपरेटिंग प्रणाली
एप्पलको नयाँ आईओएस ((I) मा नयाँ के छ
आईप्याड मिनी Claviar7कुञ्जीपाटी समीक्षा